KTM Duke 125/200 get RaceDynamics PowerTRONIC aftermarket piggyback ECU… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (33105)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10613)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9095)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8403)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7427)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (6921)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6792)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (5975)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5417)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5314)
တော်ဝင် Enfield ဂန္ထဝင်အကြားနှိုင်းယှဉ် 350 Cl vs ... (4884)
နေအိမ် → KTM → KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC aftermarket piggyback, ECU ရ ...
13 မေ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် KTM Duke 125/200 get RaceDynamics PowerTRONIC aftermarket piggyback ECU…
by Jay Prashanth on March 26, 2013 8 မှတ်ချက်များ
* The ECU raises the rev limiter of the Duke 200 သို့ 11,700 rpm ပါ
* You can get in touch with RaceDynamics on +91-80-40929292 or email them on info(တွင်)racedynamics(dot)in and sales(တွင်)racedynamics(dot)တွင်
The KTM Duke 125 and Duke 200 are motorcycles that KTM produces at Bajaj Auto’s Chakan factory. While the Duke 125 နှင့် 200 are exported to international markets, KTM sells only the Duke 200 in the Indian market. Both motorcycles have been well received across the world. Spurred by the success of the Duke 125 နှင့် 200 motorcycle models, KTM is all set to launch the Duke 390 in India by the middle of 2013.
Best Adventure Motorcycle 2013: KTM 990 Adventure Baja – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး AN 650 Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး Colleda CO KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Ducati 60 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Diavel ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စမတ် eScooter တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Moto Guzzi 1000 Daytona Injection အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1